Soslan Gatagov - eyaziwa Russian football player. Ukhuluma ngakwesokunxele emuva. Ngidlale eMoscow "Spartak" nethimba umfundi yeRussia. Okwamanje, uvikela imibala team, "torpedo-BelAZ", ukukhonza ezinkulu league ubuqhawe Belarus.
Soslan Gatagov azalelwe eVladikavkaz 1992. Namanje esikoleni nabazali wakhe bathuthela eMoscow. Ndawonye nomfowabo Alan wayelwa wabhalisa e-dolobha "esitimela". Kodwa uma lo mdala umzalwane ayeba ku "ujantshi" ngoba ezintathu zonyaka, abadingisiwe kuphela owadlalela intsha yeqembu "esitimela".
Ekuqaleni auditioned ukuthola izikhundla ezahlukene, kodwa ekugcineni kwaba fixed endaweni ngakwesokunxele emuva.
Ngo-2011, waba iqhawe ubuqhawe intsha Russia eminqubeni "ujantshi".
Debut ku football enkulu
Ukudlala ngoba intsha "esitimela", ebhekise iqembu lokuqala Gatagov icele akuvamile. Enkundleni hhayi ngiye ngasebenzisa ukufana olulodwa.
Kodwa ngo-2012 wathola isimemo kusukela eMoscow "Spartak". Mina esetshenziselwa oseqenjini i ezintathu zonyaka, futhi phakathi naleso sikhathi enkundleni cishe awuhambanga. Ubude esilethe kwempahla yayo imidlalo 5 kuphela "obomvu nomhlophe". Owokuqala waphuma enkundleni ngesikhathi umdlalo ngokumelene Krasnodar "Kuban".
Ukuze zonyaka ezintathu "uSpartacus" Gatagov kanye waba esiliva medalist Russia. Igalelo lakhe siqu ukuze impumelelo club was impela omncane.
Ngo-2015, Soslan Gatagov ngaqala ukuzama ukubazi umdlalo mkhuba Armenia ubuqhawe. Wabusekela the club "nangokuthi u-Ulysses" Yerevan ojamele Izilimi enkulu.
Ngenkathi 2015-16 sika Kuboshwe club entsha 7 imidlalo. Ithimba lakhe kwaba esimweni esinzima kwezezimali. Ngo ubuqhawe wahlulwa e 26 imidlalo aphume 28. Ngemva ukuzuza amaphoyinti ezimbili nje, zibalwa zokugcina futhi imiphumela isizini iye yahlakazeka.
Ekuqaleni 2016 wathuthela ubuqhawe Belarus Soslan Gatagov. Ibhola umdlali iqale ukudlala eqenjini "torpedo-BelAZ" kusukela Zhodino. Ukuphakama Belarus ithimba wadlala obuhlukahlukene degrees impumelelo, ngenxa ukwehluleka ukuthatha owesihlanu indawo. Ngo-30 ukufana torpedovtsy iwine izikhathi 13. Ngaphambi izindondo ubuqhawe, futhi, ngokulandelana, futhi European inkomishi, azange abe 7 amaphuzu.
Ukudlala eqenjini lesizwe
Ngo 2013 Gatagov kwahlanganiswa uhlu enwetshiwe kubahlanganyeli Universiade, aphethwe e Kazan. Nokho, ukwakheka lokugcina Awunikwanga. Kodwa ngo-2015, wathatha iqhaza Universiade Gwangju South Korea njengengxenye umfundi ithimba yeRussia.
I-Russian eqenjini lesizwe eseke eqenjini D kanye Uruguay, Ireland futhi China. Umhlangano wokuqala nge-Asians khona Kwakungelula. Yanushovsky wavula amagoli, kodwa njengoba kuqale unyaka ka engxenyeni yesibili wazibonakalisa ngaphambi amaShayina. imigomo kuphela Karasev Saramutina ukulondolozwa isimo - win 3: 2. Esikhathini yesibili umhlangano round nge Uruguayans yaphela ezakhe zidlale umdlalo ongenamagoli.
In the game yokugcina nethimba Irish Gatagova kwakudingeka ukwazi ukudlala draw noma Ngethemba ukuthi Uruguay ngeke bakwazi ukushaya China. uhlelo Okokuqala kuhlulekile A. Ekuqaleni engxenyeni yesibili, lo Irish babe 2: 0. imizuzu engu-10 ngaphambi kokuba kukhishwe indaba yokugcina ikhwela Karasev omunye ibhola kudlalwa, kodwa uma wenza umzamo owengeziwe akwanele. Khona-ke efike uhlelo B. South baseMelika iwine 2: 1. Nge 4 amaphuzu ithimba Russian iwine endaweni yesithathu futhi ayikwazanga ukushiya iqembu.
Esikhathini playoffs bezindawo 9-16 abaseRussia yabusa baseCanada 2: 0, bese nge isikolo esincane beat eMexico game for China 9th wahlulwa 3: 0.
By endleleni, phezu kwethu izimbangi iqembu ayeka usuvele 1/4 sokugcina. Irish elahlekile 0: 1 winner esizayo kule midlalo - Italy kanye nethimba Uruguay kazwelonke kanye isikolo 0: 3 ihluleke South Korea.
ukuphila Private Gatagova ngokuvamile ehambisana nobutha amahlazo idumela. Ehlobo lango-2014 e-social networks namawebhusayithi adumile babe izithombe, okuyinto ukwethula Russian kazwelonke weqembu u-Alexander Kokorin kanye ex-welungelo eMoscow "Spartak" Soslan Gatagov. jet Private, okuyinto landizela abadlali, sokucasuka isiphepho wokunganeliseki sokugxekwa football fans. On omunye izithombe abadlali nokuzikhulula ku yangasese okunethezeka liner izihlalo, ukudlala amakhadi ziyazidla lezi zinhlamvu.
Soslan Gatagov nentombi yakhe ngokuvamile basakaza isithombe ngokuhlanganyela ekuxhumaneni nomphakathi. Footballer ihlangabezana imodeli MAIL Ibadova. Ngakho uma ongaphumelela kwi-career kwezemidlalo kanti esafuna eba kungaphumeleli kakhulu, ukuphila komuntu sezisunguliwe. Abantu abasha bachitha isikhathi esiningi ndawonye: zinsumpa bethenga imfashini, ukudlala ezemidlalo, kuholele yokuphila asebenzayo.
UBarbara Berlusconi: isikhathi abesifazane ebholeni
Izithako ekukhiqizeni insipho ekhaya. Business - Umbono